I-Waterview - I-Airbnb
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Brad
Ikamelo lokulala elilodwa elihle, ikamelo lokugezela elilodwa elibheke ulwandle Ikamelo elikuvumela ukuba ubone ama-sunsets ahlaba umxhwele. Indawo ekahle, ethulile yokushaywa wumoya kanye/noma isivakashi. Itholakala kalula ekuhlaleni kokuzilibazisa noma kobuchwepheshe. Ungapheka ukubanjwa kosuku ekhishini eligcwele ngesitofu/uhhavini noma usebenzise i-grill yegesi ngaphandle kwe-patio. Sinikeza ikhofi le-Keurig nezikhwama zetiye ukuze uzibheke ekuseni. Ikamelo lethu lokulala elikhulu linikeza umatilasi we-Layla onecala elithambile noma eliqinile ukuze ulale kangcono ebusuku.
Jabulela indawo engasemanzini ene-pier yangasese ongayisebenzisela ukudoba, ukugwedla izinkalankala, ukuqalisa amathoyizi akho amanzi afana nokugwedla ngesikebhe, ukugwedla ngesikebhe noma ukuhlobanisa isikebhe sakho ngenkathi ujabulela ukuhlala kwakho. Ukushayela ibanga elifushane ukuya e-MDIR raceway, (Ukupaka okwengeziwe kwe-trailer okungaphandle kwesayithi emabangeni okuhamba ngezinyawo ngenkokhiso eyengeziwe) I-Buddha 's creek motocross, i-Wicomico motor sports park, i-Chaptico BMX park, i-Tree Notch Trail, i-Pax naval base, i-Dahlgren, i-Andrew' s Air force base, i-National port nayo enikeza i-GreatM uma uzizwa unenhlanhla, Ukubuka indawo e-Washington DC, i-Baltimore National port. Futhi ngemoto emfushane ukuya kuzo zonke izindawo ezithandwayo zase-Washington/e-Baltimore nayo yonke imicimbi emikhulu yezemidlalo. Noma ukushayela ibanga elifushane kubantu bedolobha lethu abangathanda impelasonto enokuthula nokuthula.
Indawo ibanga elifushane kusuka ezindaweni zokudlela ezihlukahlukene ezitholakala kalula phakathi kwe-California, i-LaPlata, i-Solomon 's Island noma i-Waldorf enezindawo zokudlela eziningi ongazicabanga noma uma ufuna ukuba nobusuku obumnandi obuthule e-, uhlu lwezindlela ezilula zokudiliva zizogqanyiswa nawe. I-Grubhub ne-Doordash nazo zihlinzeka ngezinketho zokudiliva.
Lena yindawo yokuqasha ye-In-Law suite. Sihlala engxenyeni ephezulu yekhaya futhi sizotholakala ngokwesidingo.